Aung's Investment: မြန်မာပြည်မှ Bubbleများ
Posted by Aung Myo Htet at 1/20/2011 01:53:00 AM
Raymond.Kyaw Minn Naing January 20, 2011 10:56 AM
Boss.., ပေါက်သွားပြီးတဲ့ထဲမှာ Internet Cafe bubble လဲပါသေးတယ်လေ။ ကိုယ်တွေ့။
Aung Myo Htet January 20, 2011 10:58 AM
ဟားဟား။ ရေးမလို့ဘဲ။ အဲဒါက ပေါက်တာကြာလှပြီမို့ မရေးတော့တာ :) ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်တွေ့ပါပဲခင်ဗျာ။
Yan January 20, 2011 1:40 PM
ဘရားသား highlight လုပ်ပြထားတာလေးတွေ တော်တော်လေးကို အကျိုးရှိတယ်. ဗဟုသုတလည်း ဖြစ်စေတယ်.
ဘဏ်တွေမှာ အွန်လိုင်းစနစ်တွေ ဖြစ်လာရင်ရော Dotcom Bubble တွေ မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်မထလာနိုင်ဘူးလား. ပြီးတော့ PayPal လိုမျိုး အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေရော.....
စတော့မားကတ်ကတော့ ပေါ်ဖို့ ဝေးပါသေးတယ်. ဒါပေမယ့် ရှယ်ယာခေါ်ပြီး လုပ်တာတို့၊ IPO ပုံစံလေးတွေများ ဖြစ်လာနိုင်မလားလို့ တွေးကြည့်မိတယ်.
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာဝေဖန်ထောက်ပြထားတဲ့ ဒီလိုဆောင်းပါးမျိုးလေးကို တော်တော်လေး နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်. ဆက်လက်ရေးသားပြုစုနိုင်ပါစေဗျာ.
nyimuyar January 20, 2011 2:13 PM
awesome point of views, I like it so much.
Jimm Terry January 20, 2011 2:57 PM
NayLin January 20, 2011 3:40 PM